4 nzira Trump anoedza kuva mambo - TELES RELAY
HOME » kambani 4 nzira Trump anoedza kuva mambo
Kupindura Gweta re White White, Pat Kucollone, tsamba yake kuna Nadler, achiti kupomerwa kwake kwekuvhiringidzika kwaiva "kupesana" neHurumende yekodzero dzepamutemo, Nadler akataura kuti White House yaitora "hapana yapfuura uye isingatsigwi nemutemo, mudzidzisi iwe. "
Apo vatsoropodzi vehurumende vanonyevera nezvenzira yeumambo umo Trump iri kuedza kushandisa simba rake, vamwe vadziviriri vanotaura kuti vamwe vatungamiri vakanyurawo simba ravo zvakanyanya mumakumi emakumi apfuura. Vose vatungamiri vakaita saizvozvo muCongress, vanoti.
Vatsigiri ve mutungamiri vakarurama. Ichokwadi kuti hurumende yakava hurukuro yakawanda yemumambo panguva ye20e uye 21e mazana emakore. Kunyangwe mushure mokunge mararamiro ekugadziriswa kweMvuragate mumakore e1970 akaedza kuva nezvakataurwa nomunyori wenhau dzakaitika Arthur Schlesinger Jr. mu 1973 "mutungamiri wehurumende ", Simba guru rakaramba richiwedzera uye rakaramba richisimbisa.
Asi sezvo hurumende iine hurumende, Trump iri kugadzira zvikamu zvina zvakatangira zvinogona kuva nemigumisiro yakareba yenguva refu kwechirongwa.
Zvekare 1: Kutumira kwekutonga
Izvo zvakatora maitiro pamavhiki mashomanana apfuura nharo inoratidza kuti hapana kutonga kwakakosha kunze kwekunge Mutungamiri achibvumirana nehurumende yekubvunza. Kunyangwe pasina kusvitsa ropafadzo yehutungamiri, Trump akati haazobvumirano pamwe nekupi kwekutsvakurudza kunopfuurira.
Kusiyana nevatungamiri vepanguva yakapfuura avo vakaramba zvakananga kuongororwa-uye ndiani akaedza kuchengetedza mapepa chaiwo evarayiridzi uye magwaro anobva pane ropafadzo huru - Trump akataura kuti aiva nesimba guru rekuti kwete chikumbiro chinobva kumabato ose ehurumende paanenge achida.
Tichifunga chete kuti kubvunzurudza kunobatanidza, chirevo chokuti vazhinji vatungamiri vakaita mumatambo anoita seakakwana kukanganisa kodzero yeCongress yekutonga mahofisi ayo.
Izvi zviri kuwedzera kune imwe nyika isati yasati yaitwa yekuvhara kutsvakurudza kukuru kuRussia kuedza kupindira muzvisarudzo zve2016. Kana Congress nevanamatare vachikodzera chigaro cheTrump nekuda kwekusaita kwavo pachavo, chisarudzo ichi chichange chiri chiito chikuru mukuderedza kukwanisa kwebumbiro rezvematongerwo enyika kuita kuti mutungamiri ataure.
Nheyo 2: Kushandisa chigaro chekutyisidzira kwemashoko asina kunaka
Trump akafambawo kupfuura avo vaitangira kare pakasvika kushandisa chigaro chekutyisidzira kuparadzira zvisiri izvo. Zvechokwadi, zvakakosha kuziva kuti vanenge vose vatungamiri venhema, sezvakaitwa naEric Alterman muThe Nation, mubhuku rake rinotevera pamusoro pehurukuro, "Kureva muHurumende: Sei Vatungamiri Vari Kufa uye Nei Trump zvakanyanya kuipa here? "Dzimwe dzenhema dzavo dzave dzisina kunyanya, uye dzimwe dzakave dzakakura dzakatitungamirira kuhondo huru seVietnam neIraq. Asi Trump iri mune imwe nzira, yakanyanyisa uye inopofumadza.
Maererano neWashington Post, mutungamiri akaita zvinopfuura 10 000 nhema kana kuti mashoko anotsausa . Inoparadzira ruzivo rwenhema pasina kunyara kwekunyadzisa uye nekugara kwenguva iyo inowanzoita ichi chiito. Kushandisa kwake izvo Theodore Roosevelt nenzira iyi ainzi "chigaro chekutyisidzira" kweWhite House chikamu chegadziriro yezvematongerwo enyika. Inoparadzira ruzivo rwenhema, urongwa hwekuita runyengeri uye zvinopomerwa zvinopesana kuti zvipikisane nharo hurukuro yevanhu, kutungamira nhepfenyuro yenyika uye kuderedza kubvumirana kwevadzivisi vayo.
Takaona pakutanga pamusoro pekushandiswa kwemasimba emutungamiri wehurumende nekutaura kweTrump kwenhema pamusoro pehukuru hweboka revanhu panguva yekugadzwa kwake, uye takaona kupararira kwake muhuwandu hwevanhu. Kuregererwa kwekusava nehanya kwaanoshandisa nayo purogiramu yake yemutungamiri wenyika kusvibisa hurukuro yavose nenhema kunoshandiswa kwehasha uye kushatirwa kwevane simba.
3: Kupa mutemo Kukonana kwezvaunofunga
Trump akashandisawo simba rake kuti apike mhirizhonga huru uye isati yavapo yezvakakosha mubasa iri. Chimwe chezvinhu zvinotambudza zvikuru neHurumende yeTrump kubvira apo yakatanga kuve kukaramba kwekuzivisa ruzivo rwekutere, uye zvakare kukanganisa kwayo pakuumba moto wakakomba pakati pehutungamiri hwayo nekambani yayo. Panzvimbo pokusiya kukanganisa kwekambani yake, aizongopfuurira kusvika kupa vana vake kuvakuru vekambani, izvo zvingasava zvakakosha mukuita.
Nepo vamwe vatungamiri vave vakapomerwa nezvekupesana kwechido (zvakadai saRyndon Johnson nemudzimai wake, Lady Bird, nemitambo yeterevhizheni yavaiva navo kuTexas), hakuna kumbove nemamiriro ezvinhu akasiyana yehukuru hwakadaro. Imba yemutungamiri ndeye zvakananga zvakananga nekutonga kwezvematongerwo enyika zvinotora nguva dzose, kusanganisira mutemo wenyika.
Kushandiswa kweTrump nzvimbo dzekugadzirira kwemahofisi ehurumende uye yekuti Trump International Hotel muWashington ndiyo inofarira hurumende kune dzimwe nyika dzakadai seSaudi Arabia inoratidzira hurongwa hwakaoma iye akachengetedza. Mutungamiri wekusimbisa kuti zvakanga zvisina kudii kuparadzanisa bhizinesi kana kuti kuisa kure nemhuri yake yepamusoro kwaiva kushorwa kwesimba.
Zvekare 4: Kushandisa simba rehurumende rinoshandiswa kuti richinje mutemo
Trump yaive yekuonga emasimba nesimba rake mune dzimwe maitiro, sekushandisa simba guru rekugadzirisa mitemo yehurumende nekubvisa unilaterally kubva kune dzimwe nyika zvibvumirano, zvakadai senyika yenyukireya. Kunyange zvazvo kushandiswa kwemasimba makuru hakusi itsva pakati pevatungamiri, dzimwe nguva yakaenda kupfuura izvo zvakatangira. Asi mutungamiri wesarudzo yekukumbira simba rehurumende rekukurumidzira kuwana mari yekugadzirisa pamadziro ayo Congress yakaramba kuramba ichibhadhara ndiyo muenzaniso unonyanya kuratidza rusununguko rwaanoda kushandisa simba rake. Kana matare akasaisundira, ichapa muenzaniso wevaMongorori veDemocratic and Republican kuti vawane mari yavanoda pasina kubvumidzwa kwekuregererwa.
Pose apo vatungamiri vanokurisa simba rehofisi uye Congress haina kuita, sangano rehurumende rinowedzera. Kusiyana nemakore e1970, kushamwaridzana kwakasimba ikozvino kunopa Trump mamiriro ekuratidza zvakajeka sezvainoenderera mberi mumutungamiri wayo weumambo. VaRepublicans havana kubvuma pane izvi.
Huru hurumende yakatendeseka kumutungamiriri wehurumende yakaderedza zvakasimba kambani dzezvematongerwe enyika kubva mukutsvaga kupomerwa mhosva nokuti vanotya kuti kuedza kwavo kuchashorwa muSeneti. Kunze kwekuti Congress isati yawana nzira yekudzokera shure, hurumende ichava yakawanda zveumambo apo Trump apedza nguva yake, achizosiya Makamende anouya akatarisana ne White House izvo zvichakwanisa kukonzera kukanganisa kukuru kune mamwe masangano. pasina njere. yezvisimba.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.cnn.com/2019/05/17/opinions/four-ways-trump-trying-to-be-king-opinion-zelizer/index.html